ခိုင်မာသောသံမဏိလုပ်ငန်းမရှိလျှင်၎င်းသည်ခိုင်ခံ့သောကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။ | RayHaber
[16 / 12 / 2019] Kocaelikart ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးသတိပေး!! နောက်ဆုံးနေ့ 1 ဇန်နဝါရီ	41 Kocaeli
[16 / 12 / 2019] AkçarayKuruçeşmeတိုးချဲ့ရန်လိုင်းစီမံကိန်းပြီးပြီ	41 Kocaeli
[16 / 12 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းအရာကွန်ဂရက်အကြောင်းမနက်ဖြန်စတင်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[16 / 12 / 2019] TÜLOMSAŞကမ္ဘာ့နာရီများထုတ်လုပ်သည်	26 Eskisehir
[16 / 12 / 2019] TÜLOMSAŞသည်သော့ခလောက်သောယုံကြည်မှုဖြင့်၎င်း၏အမျိုးသား YHT မစ်ရှင်ကိုစောင့်မျှော်သည်	26 Eskisehir
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး78 Karabükခိုင်ခံ့သောသံမဏိလုပ်ငန်းမရှိလျှင်ခိုင်မာသောကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမဖြစ်နိုင်ပါ
02 / 12 / 2019 78 Karabük, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
Kardemir Karabükသံနှင့်သံမဏိလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ အထွေထွေမန်နေဂျာ။ ဒုတိယကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှာတူရကီ 2023 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး '' ပြောသောအတွက်ဒီနှစ်ကျင်းပဟူစိန် Genocide, Lutfi Kirdar ကွန်ဂရက်စင်တာအားဖြင့် Sabah သတင်းစာ, ပြားအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ Soykan ကပြောကြားရာတွင်“ ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းကဏ္ over သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။ အထူးစက်မှုအခြေအနေ မှလွဲ၍ စက်မှုထွန်းကားခြင်းသည်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းသည်သံနှင့်သံမဏိဖြစ်သည်။ သင့်မှာခိုင်ခံ့တဲ့သံမဏိလုပ်ငန်းမရှိဘူးဆိုရင်သင့်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမရှိဘူး။
တူရကီရဲ့ကာကွယ်ရေးစက်မှု 2023 ရူပါရုံကိုနှင့်အစည်းအဝေးများမနေ့ကရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ CEO ဖြစ်သူဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်၏အနာဂတ်မဟာဗျူဟာဆွေးနွေးရန် HUSEYSY Soykan အပြင်TUSAüအထွေထွေမန်နေဂျာ Prof.Dr. ဒေါက်တာ Temel Kotil၊ Aselsan ဥက္ကChairman္ဌနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ ဒေါက်တာ BMC မြေယာယာဉ်များ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Haluk Görgün, BülentSantırcıoğlu, ဟောပြောသူအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးပွဲကိုကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး Ruhsar Pekcan အဖွင့်မိန့်ခွန်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်သံမဏိ၏နေရာနှင့်အရေးပါပုံကိုသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ Hüseyin Soykan ကတရုတ်နိုင်ငံရှိသံမဏိသည် 1,8 ဘီလီယံထက်ဝက်ကျော်ကိုမနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့သောသံမဏိထုတ်လုပ်မှု၏စပါးထုတ်လုပ်မှုမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများတွင်အမေရိကန်သမ္မတ Trump အသုံးပြုသောအဓိကအငြင်းပွားမှုများသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ခိုင်မာသောသံမဏိလုပ်ငန်းမရှိသောနိုင်ငံများ၊ သံမဏိအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းကြောင့်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အားနည်းချက်များကိုခံစားရလိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒဆန့်ကျင်လုပ်ငန်းများ, များစွာသောအနောက်နိုင်ငံများကာလအတွင်းယခုနှစ် xnumx'l ရဲ့အဆုံးမှာ, တူရကီရဲ့သံမဏိ Soykan သတိပေးသည့်ပိတ်ဆို့မှုမှထောက်ပံ့နေသည် "1990 နှစ်ပေါင်းကူးမြောက်ဘာမှပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူတို့သည်စစ်သုံးယာဉ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောသံမဏိပစ္စည်းများမပို့ကြပါ။
ထို့အပြင်သူ၏မိန့်ခွန်း၌ဤပြexperiencedနာကိုကြုံတွေ့ပြproblemsနာများ၏ဖျက်သိမ်းရေးသည်သူ၏အကြံပြုချက်များစာရင်းပြုစုသူ Soykan, ပထမ ဦး ဆုံးအရေအတွက်, အရွယ်အစား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသဏ္andာန်နှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသံမဏိအရည်အသွေးကိုလုပ်ရပါမည်ထို့နောက်တိုတောင်းသော, အလတ်စားနှင့်ရေရှည်စီမံကိန်းများရှေ့ဆက်ထားခဲ့ကြသည်ဖော်ပြထားနှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူသံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းများအပြည့်အဝပေါင်းစည်းမှုသေချာပါလိမ့်မည်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ။ ကဏ္ sector ကိုယ်စားလှယ်များအတူတကွစုစည်းပြီးလိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် interface အခွင့်အာဏာကိုသတ်မှတ်သင့်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီ 40 သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်းများမယ့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူတစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန်သန်း, ကမ္ဘာ့ 8 ။ , ဂျာမနီပြီးနောက်ဥရောပ,2အတွက်နေစဉ်။ Dr. အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုသည်။ Hüseyin Soykan သည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းပေးခဲ့သည်။ Kardemir ၏ငယ်ရွယ်သောသမ္မတနိုင်ငံသည် 14 ဖြစ်သည်။ Gazi Mustafa Kemal Atatürkနှင့်တည်ထောင်ခေါင်းဆောင်မှု 1930 ၏ရူပါရုံ၌ 's နှင့်အဆုံး၌စစ်ဆင်ရေးဖြစ်လာကြောင်း' 'ကိုအောက်ပါအတိုင်း Voice အခြေခံအဆောက်အဦလုပ်ကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်မိန့်ခွန်းလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတူရကီရဲ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစက်ရုံများ' 'ခေါင်းစဉ်ထူထောင်စက်ရုံဆက်လက်:
X ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတနိုင်ငံ၏2။ သမ္မတကြီးချမှတ်ထားသည့် 2023 ၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ၏ရည်မှန်းချက်ကိုအထောက်အကူပြုသည့် Kardemir တစ်ခုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်ဘဏ္financialာရေးနှင့်နည်းပညာရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်တွင်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်နိုင်ငံ၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ကာကွယ်ရေး၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစသည့်အရေးပါသည့်ကဏ္toများကိုထည့် ၀ င်သည်။ စစ်သုံးယာဉ်များတွင်အသုံးပြုသည့် Tank pallet နှင့်စတီးများ၊ စစ်သုံးယာဉ်များတွင်သုံးသည့်စွဲကပ်ခြင်း၊ သံမဏိ၊ အမျိုးမျိုးသော ၀ တ်စားဆင်ယင်နိုင်သောကူးပြောင်းနိုင်သောဒြပ်စင်များတွင်အသုံးပြုသည်၊ သင်္ဘောများနှင့်ရေငုပ်သင်္ဘောများ၌အသုံးပြုသောကျဉ်းမြောင်းသောသံမဏိများ၊ နှင့်မီးရထားဘီးထုတ်လုပ်သူ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါတို့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်သောအရာကိုငါတို့သမိုင်း၌ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်Karabükရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ဒီတုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူစက်ရုံကိုတောင်တန်းများကဝိုင်းရံထားသည့်ကရာဘွတ်ခ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်ပျံကိုအလွယ်တကူဗုံးကြဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ” Soykan ကသူ၏နိဂုံးချုပ်ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်“ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလုံခြုံမှုမရှိရင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေသံမဏိလုပ်ငန်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့လည်းငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှသံမဏိထောက်ပံ့ရေးများအတွက် Kardemir ...
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းလွတ်လပ်သောဇုန်ကို Ankara တွင်တည်ထောင်ရမည်
TCDD နှင့်TÜDEMSAŞ Lodge အိမ်တံခါးအိုး Rant
356 KPSS ပဋိညာဉ်စာတမ်းထမ်းခေါ်ယူမှုမပါဘဲလုပ်ဖို့ TCDD
356 အလုပ်သမားများန်ထမ်းခေါ်ယူမှုမပါဘဲလုပ်ဖို့ TCDD KPSS ပဋိညာဉ်စာတမ်း!
ရထားယာဉ်များ၏စုဆောင်းခြင်းမှ ASELSAN ကာကွယ်ရေး
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး ASELSAN, Bursa စက်မှုလုပ်ငန်း Met
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် 14 မိတ်ဆက်နယူးစီမံကိန်း
ငလျင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်Workmamoğluသည် Istanbul Istanbul လူသတ်မှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်
TÜBİTAK SAGE စီမံကိန်း ၀ န်ထမ်း (အင်ဂျင်နီယာနှင့်သုတေသနနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ)
TÜBİTAK SAGE သည်စီမံကိန်း ၀ န်ထမ်းကိုခန့်အပ်မည်။
Aydın Adnan Menderes တက္ကသိုလ်မှပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားမည်
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဆိုင်ရာလေကြောင်းညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန
Kocaelikart ဗီဇာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးသတိပေး!! နောက်ဆုံးနေ့ 1 ဇန်နဝါရီ
RayHaber 16.12.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - လျှပ်စစ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို Ankara မြေအောက်ရထားအတွက်ဝယ်ယူလိမ့်မည်